दाइजोकै निहुँमा धेरै महिलालाई जिउदै जलाइन्छ,आखिर कहिले सम्म ? – Online National Network
दाइजोकै निहुँमा धेरै महिलालाई जिउदै जलाइन्छ,आखिर कहिले सम्म ?
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०१:४४
सम्बन्धविच्छेद गर्न नमानेको आरोपमा घरपरिवारबाटै जिउँदै जलाइएकी २० वर्षीया हजरा खातुनले सोमबार कीर्तिपुरस्थित स्किन अस्पतालमा प्राण त्यागिन्। धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका-८, हार्सरकी हजरालाई माघ २० गते श्रीमान् रसिद राइनसहित सासूससुरा मिलेर मट्टीतेल जिउमा खन्याएर घरमै आगो लगाएको आरोप माइती पक्षको छ।
शरीर जलेकै अवस्थामा खातुनको उद्धार गरी सुरुमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराएको थियो। तर, त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं कीर्तिपुर अस्पतालमा भर्ना गरियो। तर, यहाँ पनि उनको जीवन रक्षा गर्न असम्भव भयो।
जलाइएको १० दिनपछि अन्ततः उनको प्राणपखेरु गयो। खातुनको टाउको भन्दा तलको शरीरको सम्पूर्ण भाग जलेको थियो। मृत्युअघि हजराले आफूलाई पति रसिद, ससुरा अलिशेख कवारी, सासू रामसुनरी खातुन र नन्द जाहिर खातुन मिलेर जिउमा मट्टीतेल छर्की आगो लगाएको जानकारी प्रहरीलाई गराएकी थिइन्।
दोस्रो बिहे गरेका पतिबाट पेट्रोल खन्याएर जलाइएकी सिन्धुपाल्चोककी अञ्जली श्रेष्ठ यतिबेला अग्नि हिंसापीडित नेपाल (विभिएस) को संरक्षणमा छन्। ०७३ असोज ६ मा अञ्जलीमाथि आगो लगाएर जलाइएको थियो। आगोका कारण उनको घाँटी र छाती जलेको छ। ‘अग्नि हिंसा’ सम्बन्धी एक कार्यक्रममा आइतबार पीडा सुनाउने क्रममा पुरानो घाउ सम्झेर अञ्जलीका आँखा रसाए।
दाइजो र कथित बोक्सी विवादका कारण महिलामाथि मट्टीतेल, पेट्रोल वा एसिड खन्याएर जलाउने क्रम बढ्दो छ। एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले आठ वर्षको अवधिमा एक सय ७९ जना महिला र बालबालिकामाथि एसिड छ्यापेर र जलाएर हिंसा गरिएको छ।
यीमध्ये ५५ प्रतिशतले गहिरो घाउका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना र न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था अग्नि हिंसापीडित नेपाल (विभिएस) ले २०१० जनवरीदेखि २०१८ जनवरीसम्म गरेको अध्ययन सर्वेक्षणले यस्तो भयावहको अवस्था देखाएको हो । – अन्नपूर्ण पोस्ट